Ny sidina mankany Irak, Espana, Kenya, Slovakia dia manomboka izao avy any Russia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Ny sidina mankany Irak, Espana, Kenya, Slovakia dia manomboka izao avy any Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Irak • Kenya Breaking News • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao Mafana Slovakia • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Io didim-panjakana io dia mametra vonjimaika ny fidirana ao amin'ny Federasiona Rosiana misy teratany vahiny sy olona tsy misy zom-pirenena noho ny areti-mifindra coronavirus. Ny antontan-taratasy firaketana dia mamaritra ny lisitry ny firenena, izay ahafahan'ny olom-pirenena miditra ao Rosia amin'ny alàlan'ny teboka fidiran'ny rivotra.
Manitatra ny lisitr'ireo firenena i Russia, izay avela hiditra an'habakabaka hiditra an'habakabaka indray ny olom-pirenena.
Iràka, Espana, Kenya, Slovakia dia nampiana ho ao anatin'ny lisitr'ireo firenena nanohizan'i Rosia ny serivisy tamin'ny serivisy.
Ny fampiatoan'i Russia ny sidina mankany Tanzania noho ny toe-javatra epidemiolojika ao amin'ny firenena dia nitarina hatramin'ny 1 Oktobra.
Tao amin'ny didim-pitsarana navoakan'ny governemanta izay navoaka tao amin'ny vavahady ofisialy ny fampahalalana ara-dalàna, nanambara ny manitatra ny lisitry ny firenena ny tompon'andraikitra rosiana, ary avela hiditra ao Russia amin'ny alàlan'ny dia an-dranomasina ny olom-pirenenan'izy ireo.
Nitarina firenena efatra ny lisitra ary ao anatin'izany i Iraq, Spain, Kenya ary Slovakia.
Antontan-taratasy mifampitohy amin'ny didim-panjakana navoakan'ny 16 martsa 2020, izay nitarina tamin'ireto toerana manaraka ireto: “Irak, Espana, Kenya, Slovakia. ” Ny didim-panjakana dia mametra vetivety ny fidirana ao amin'ny Federasiona Rosiana an'ny olom-pirenena vahiny sy olona tsy manana zom-pirenena noho ny areti-mifindra coronavirus. Ny antontan-taratasy firaketana dia mamaritra ny lisitry ny firenena, izay ahafahan'ny olom-pirenena miditra ao Rosia amin'ny alàlan'ny teboka fidiran'ny rivotra.
Nosoniavina ny 21 septambra 2021 ny antontan-taratasy vaovao. Notaterin'ny ivon-krizy anti-coronavirus fa nanomboka io daty io dia nanohy ny serivisy an'habakabaka niaraka tamin'i Irak, Espana, Kenya ary Slovakia i Russia, ary koa nesorina ny fameperana rehetra momba ny serivisy an'habakabaka miaraka amin'i Belarus.
Talohan'izay dia nosokafan'i Moskoa ny sidina mankany amin'ny firenena 53. Mandritra izany fotoana izany, ny fampiatoana ny sidina mankany Tanzania noho ny toe-javatra epidemiolojika ao amin'ny firenena dia nitarina tamin'ny 1 Oktobra.